အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျန်းမာရေးအတွက် စားကြစို့ဘရိုကိုလီ
26 Responses to “ကျန်းမာရေးအတွက် စားကြစို့ဘရိုကိုလီ”
ရေနွေးနဲ့ စိမ်ပြီး ဒီတိုင်း မာယိုနစ်နဲ့ မနက်စာ အဖြစ်တို့စားလိုက်တာပဲ။ ကြော်ဖို့ သုပ်ဖို့ထိ
ဘယ်တော့မှ မကျန်ဘူးး)
အဲ့ ဒါ ဘရိုကိုလီတဲ့ လား..၊ ဈေးထဲမှာ
ခဏခဏ တွေ့ တယ်ဗျ၊ ဂေါ်ပီပွင့် အစိမ်းလေ။
အစက သိပ်မစယးတတ်ဖူး၊ တစ်ခါတစ်လေ
ကြော်စားကြည့်တော့နူးညံ့ လို့ မဆိုးဘူး၊
ဂေါ်ပီပွင့်အဖြူပဲ ကြောစားနေကျလေ။
အရင်တစ်ခါ ပုဇွန်လိုမဟုတ်တော့ 
ဘရိုကိုလီလား...... ချက်စားပြုတ်စား ကြော်စား လှော်စား၊ သုပ်စား အစုံလုပ်စားချင်သပေါ့ အစ်မရာ။ အခြေအနေမပေးလို့ သာ။ အသီးအနှံဆို ကြိုက်ပီးသားပဲ။ အဲ...... သုပ်စားတာလေးတော့ ပိုသဘောကျတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့တစ်နေ့လုပ်စားကြည့်မယ်။ ငှဲငှဲ
ဘရိုကိုလီကို အရမ်းကြိုက်လို့ တစ်ပတ်စာ ဈေးစာရင်းထဲမှာ အမြဲထည့်ဝယ်တယ်မမချောရေ။ ဟင်းအသစ်လေးတွေအတွက် ကျေးဇူး :)
I like fruits and vege so brocoli too.I can't have my meal without green:)Thanks Chaw.
ကျောက်ပွင့်နဲ့ မှိုနဲ့ စားတဲ့နည်းတွေကြိုက်တယ်။
ဟုတ်သေးပါဘူး အကုန်ကြိုက်တယ်။ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်။
အသုတ်လည်း စားလို့ရတာပဲ ကျနော် အကြော်တော့ စားဖူးတယ် အသုတ်တော့ မစားဖူးသေးဘူးဗျ ။
ဘရိုကိုလီကို နည်းလမ်းလေးတွေ အဖုံဖုံနဲ့ စားချင်စဖွယ် တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းတာမို့ ဂေါ်ဖီအဖြူအစား ဈေးနည်းနည်းကြီးပေမယ့် Broccoli Salad နဲ့ ဘရိုကိုလီကြော်တော့ လုပ်စားဖြစ်တယ်လေ။
အဲဒါမျိုးတွေ ဒီမှာ ပေါမှပေါဘဲ။ ပန်ချာပီကုလားတွေရဲ့ ကုန်စုံဆိုင်မှာ နဲနဲနှောနှော မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါတွေကို ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းလို့ဘဲ မှတ်သားထားတာ။ ဘရိုကိုလီလို့ သိတာ မကြာသေးဘူး။
အခန့်သင့်တဲ့အခါတော့ စားဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်သလိုချက်ပြုတ်ပြီးပေါ့။ မချောလိုတော့ စနစ်ကျကျ မလုပ်တတ်ဘူးးးးးးးးးး။
ကျန်းမာရေးအတွက် အသေးစိတ်လေးသိရတယ်။ တပတ်ကို သုံးလေးကြိမ်စားဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်မချောရေ။
ဘရိုကိုလီ အလွယ်စားနည်း။ အတုံးလေးတွေတုံး ရေဆေးပြီးစစ်ပြီး ဇလုံထဲထည့်ထားတဲ့ ဘရိုကိုလီပေါ်ကို
ဆားအနည်းငယ် ထည့်ထားတဲ့ ရေဆူလောင်းထည့်ပြီး ခဏထား၊ ပြီးရင်ရေအေးလေးဆေးပြီးစားလို့ရပြီ၊ နှမ်းဆီမွှေးလေးများရှိလို့ လူးလိုက်ရင် အရမ်းစားကောင်းပဲ၊
I don't like broccoli, so I never try. But after reading this useful post, I think I should start eating now. Thank you for sharing :))
ဘရိုကိုလီ ကြိုက်တယ် မချောရေ..၊ မုန်လာဥနီနဲ့ မကြာခဏ ကြော်စားဖြစ်တယ်...၊ အခုတော့ ပြုတ်ပြီး မရိုးနိစ်နဲ့ တို့စားဖို့ စိတ်ကူးရသွားပြီ...။း)
ဘရိုကိုလီကို မကြိုက်ဘူး၊ အစိမ်းကြော်တွေထဲမှာတောင်ပါရင် ဖယ်စားတယ်၊
လုပ်နည်းတွေကတော့ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ထချက်လိုက်ရုံပဲ ဘရိုကိုလီနေရာမှာ ပန်းမုန်လာပွင့် ထည့်သုပ်လိုက်မယ်။
အသီးအရွက်စိမ်းတွေအားလုံးနီးနီး ကြိုက်တဲ့ကိုယ်က ဘရုိုကုိုလီက ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းလို့ လားမသိ သိပ်မကြိုက်လို့ ရံဖန်ရံခါမှ စားဖြစ်တယ်။ အသီးအရွက်အားလုံးနီးနီး မကြိုက်တဲ့ သူ က ဘရုိုကိုလီ ကုိုကျတော့ကြိုက်တယ်။...ဟင်းးးးးးးးးး
ဘရိုကိုလီကို ရေနဲနဲနဲ့ ပြုတ်ပြီး ဒီတိုင်းစားတယ်။ သူက ကျက်လွယ်သလို ဝယ်ထားပြီးရင်လည်း ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားတာတောင် ခဏကလေးနဲ့ ဝါသွားတတ်လို့ သိတ်မဝယ်ဖြစ်ဘူး ချောရေ။ ကျန်းမာရေးအတွက် တပတ်တခါလောက် စားဖို့ ကြိုးစားဦးမှပါ....:)
အမယ် အလင်းစက် ကိုလတ်က သုပ်စားမယ်တဲ့ သတင်းရပြီ အတော်ပဲ ဟန်ကျထာ :P
ဒါမဲ့ ချော ချက်ပြထားတာတွေထဲက ဘရိုကိုလီပေါင်းကို သဘောကျတယ်။
I love broccoli too, but always lazy to cook at home. I will try the salad style if I am not lazy and thank you so much for your your recipes!!!
ဒါကို ဘရိုကိုလီလို့ခေါ်သလား.. အမြဲစားဖြစ်ပါတယ်.. ပန်းဂေါ်ဖီအ၀ါက ဈေးပိုကြီးတော့ ဒါပဲစားဖြစ်တာများတယ်.. ဒီလိုအကျိုးတွေများမယ်မှန်း မသိဘူး...
အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ချောရေ။ နည်းအသစ်လေးတွေလည်း မှတ်သွားတယ်။ လက်တည့်စမ်းပြီး အပြောင်းအလဲလေးတွေ အများကြီးလုပ်စားလို့ရသွားပြီ။ နည်းမျိုးစုံမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ...း)
စားချင်တယ် .. စားချင်တယ် ..း(((
အထဲက ကောင်ကောင်တော့ ကြောက်တယ် .. :D
လုပ်စားဦးမယ် မချောရေ ရှဲ့ရှဲ့း)